Fiarovana amin'ny induction heating, DaWei induction heater Equipment
inona ny tombony amin'ny fanamafisana ny induction, ny familiana, ny fanamafisana, ny fiorenana ary ny fananganana, sns.?
Nahoana no misafidy ny fanasitranana indostria eo ambonin'ny lelafo mivelatra, famolahana, fantson-drano na fomba hafa fanasitranana? Ity famintinana fohy momba ny tombontsoa lehibe ananan'ity famokarana maivana maoderina ity amin'ny famokarana mena:
Fanamorana ny induction dia ampidirina ao anatin'ny ampahany amin'ny alàlan'ny alàlan'ny herinaratra mifandimby. Vokatr'izany dia mihena ny ady amin'ny vokatra, ny fanodikodinana ary ny tahan'ny fandavana. Ho an'ny kalitaon'ny vokatra faran'izay betsaka, ny ampahany dia azo atokisana ao anaty efitrano mihidy miaraka amin'ny banga, tsy mihontsina na mampihena ny atmosfera hanafoanana ny vokatry ny fitrandrahana. Ny vidin'ny famokarana dia azo hatsaraina satria haingana be ny fampidirana; ny hafanana dia novolavolaina mivantana ary niaraka tamin'izay (> 2000º F. ao amin'ny <1 segondra) ao anatin'ilay ampahany. Saika eo no ho eo ny fanombohana; tsy ilaina ny fanafanana na ny fanamoriana. Ny dingam-panafenana fampidirana dia azo tanterahina amin'ny gorodona famokarana, eo akaikin'ny masinina mamorona mangatsiaka na mafana, fa tsy mandefa andiana faritra amin'ny faritra misy lafaoro lavitra na subcontraktor. Ohatra, ny fizotran'ny brazing na ny soldering izay nitaky fomba fanamafisana ny andiam-potoana tsy andaniam-potoana dia azo soloina miaraka amin'ny rafitra famokarana mikoriana maharitra iray.
* Fanaraha-maso Fanaraha-maso
Ny fanamorana ny induction dia manafoana ny olana tsy mifanaraka amin'ny lanjany sy ny kalitaony
miaraka amin'ny lelafo mivelatra, fanasatry ny afo ary fomba hafa. Raha vao voamarina tsara ny rafitra ary manangana, dia tsy misy asa na fiovàna; Ny môtô fanamafisam-peo dia azo averina indray ary tsy miovaova. Amin'ny rafitra maoderina maoderina, ny fifehezana ny mari-pana amin'ny famantaranandro dia manome valiny miavaka; Ny fahefana dia afaka manova avy hatrany na mihidy. Miaraka amin'ny fanaraha-maso ny fikorisana ny hafanana, mihandrona rafitra fanamorana ny induction manana ny fahaizana mandrefy ny maripanan'ny ampahany tsirairay. Ny tahan'ny fiakarana, ny fihazonana ary ny fidinana manokana dia azo apetraka ary ny data dia azo raisina ho an'ny ampahany tsirairay izay mihazakazaka.
* Fanaraha-maso Fanadiovana
Hisy rafitra fanamafisam-peo Tsy mandoro angovo fôsily mahazatra; Ny fampidirana dia dingana madio sy tsy simba izay hanampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny rafitra fampidirana dia manatsara ny fepetra ho an'ny mpiasa amin'ny alàlan'ny fanesorana ny setroka, ny hafanana mangatsiatsiaka, ny fivoahana sy ny rivotra mahery vaika. Ny fiarovan-tena dia azo antoka sy mandaitra tsy misy lelafo mivelatra mba ahafahan'ireo orinasa mampidi-doza ny orinasa. Ny fitaovana tsy mitondra fitondran-tena dia tsy voakitika ary afaka mipetraka akaiky akaikin'ny faritra fanasitranana tsy misy simba.
Reraka amin'ny fitakiana fampidiram-bola? Io dingana miavaka amin'ny angovo io dia mamerina hatramin'ny 90% ny angovo handoavana herinaratra ho hafanana mahasoa; Ny fandroana batch dia amin'ny ankapobeny fotsiny 45% energy-efficient. Ary satria ny fikolokoloana dia tsy mila milina mafana na mangatsiatsiaka, ny fihenan-tsakafon'ny hafanana dia mihena hatramin'ny kely indrindra. Ny fiverimberenana sy ny tsy firaharahiana ny dingana fampidirana dia mahatonga azy hifanaraka amin'ny rafitra maoderina maoderina.
tombony amin'ny fanamafisana ny induction